“Update သတင်းတွေထက် စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုချင်တာမို့ Facebook အကောင့်ကို သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ညိုမင်းလွင်” - Cele Connections
“Update သတင်းတွေထက် စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုချင်တာမို့ Facebook အကောင့်ကို သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ညိုမင်းလွင်”
အနုပညာမှာ ဘက်စုံတော်တဲ့ သူလို့ ပြောရမယ့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး အမိုက်စား ရိုက်ချက်တွေနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောကျ အားပေးမှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ညိုမင်းလွင်ဟာ ရိုက်သမျှ ဇာတ်ကားတိုင်းဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ မက်ဆေ့ခ်ျကောင်းလေးတွေအနေနဲ့ ကျန်စေခဲ့အောင် ရိုက်တတ်တဲ့သူပါ..။ ညိုမင်းလွင်က သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ကာ မျှဝေလေ့ရှိသူပါ..။
ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာတော့ ညိုမင်းလွင်က ဗိုင်းရပ်စ်သတင်းတွေကြောင့် Facebook အကောင့် သိပ်မသုံးဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းလေးကို “ဒီရက်တွေမှာ ကျွန်တော် Facebook သုံးတဲ့ပုံစံပြောင်းထားပါတယ်။ မနက်ပိုင်း post တင်ချင်ရင် တင်လိုက်တယ်၊ ပြီးရင် log out လုပ်ပြီး facebook application ကိုပါ ဖုန်းထဲကနေ delete လုပ်ပစ်ပါတယ်၊ အရင်လို comments တွေကို မဖတ်ဖြစ်တော့တာ၊ ဖတ်ပြီးကြောင်း love reacts နဲ့မပြဖြစ်တော့တာကိုတော့ တောင်းပန်ပါတယ်၊ 1M = 1Kyat နဲ့တွက်ရင် တစ်နေ့ကို မြန်မာငွေနှစ်ရာကျပ်ကျော်ကျော် ဖြုန်းပစ်သလိုဖြစ်နေပေမယ့် ဘာကိုမှကြောက်မနေချင်တဲ့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လောလောဆယ်မှာ ဒီနည်းကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒီ့ထက်တဆင့်ထပ်တက်သွားရင်တော့ ပြန်ကိုဝင်မလာတော့ဘူးပေါ့လေ၊ update သိနေတာကိုရွေးမလား၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရွေးမလားဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ ဒုတိယတစ်ခုကိုပဲရွေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဘာကိုမှကြောက်မနေချင်၊ စိုးရိမ်မနေချင်တဲ့လူဆိုတော့ အခုအချိန် newsfeed က သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး၊ အားလုံးပဲပျော်စရာ သင်္ကြန်ရက်များဖြစ်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ With love, ညိုမင်းလွင်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ညိုမင်းလွင်ကတော့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ ကြောက်ရွံမနေချင်တဲ့ သူမို့ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေနိုင်အောင် Facebook ကို သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ညိုမင်းလွင်ပြောသလို စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ Update သတင်းသိနိုင်မှုဆိုရင် ဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲ၊?? ပရိသတ်ကြီးလည်း ထင်မြင်မိတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို မှတ်ချက်လေးတွေအဖြစ် ရေးသားခဲ့ကြပါဦးနော်..။
Source: Nyo Min Lwin’s Facebook
“Update သတငျးတှထေကျ စိတျခမျြးသာမှုကို လိုခငျြတာမို့ Facebook အကောငျ့ကို သိပျမသုံးဖွဈတော့ဘူးဆိုတဲ့ ညိုမငျးလှငျ”
အနုပညာမှာ ဘကျစုံတျောတဲ့ သူလို့ ပွောရမယျ့ သရုပျဆောငျ ဒါရိုကျတာ ညိုမငျးလှငျကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ကာရိုကျတာတိုငျးကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသိအမှတျပွု အားပေးမှုတှကေို ရရှိခဲ့ပွီး အမိုကျစား ရိုကျခကျြတှနေဲ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ သဘောကြ အားပေးမှုတှကေို ရရှိနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ညိုမငျးလှငျဟာ ရိုကျသမြှ ဇာတျကားတိုငျးဟာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ မကျဆခြေျ့ကောငျးလေးတှအေနနေဲ့ ကနျြစခေဲ့အောငျ ရိုကျတတျတဲ့သူပါ..။ ညိုမငျးလှငျက သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုအကွောငျးလေးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျကာ မြှဝလေရှေိ့သူပါ..။
ဒီနေ့ ဧပွီလ (၁၂)ရကျနေ့ သင်ျကွနျအကွိုနမှေ့ာတော့ ညိုမငျးလှငျက ဗိုငျးရပျဈသတငျးတှကွေောငျ့ Facebook အကောငျ့ သိပျမသုံးဖွဈတော့တဲ့ အကွောငျးလေးကို “ဒီရကျတှမှော ကြှနျတျော Facebook သုံးတဲ့ပုံစံပွောငျးထားပါတယျ။ မနကျပိုငျး post တငျခငျြရငျ တငျလိုကျတယျ၊ ပွီးရငျ log out လုပျပွီး facebook application ကိုပါ ဖုနျးထဲကနေ delete လုပျပဈပါတယျ၊ အရငျလို comments တှကေို မဖတျဖွဈတော့တာ၊ ဖတျပွီးကွောငျး love reacts နဲ့မပွဖွဈတော့တာကိုတော့ တောငျးပနျပါတယျ၊ 1M = 1Kyat နဲ့တှကျရငျ တဈနကေို့ မွနျမာငှနှေဈရာကပျြကြျောကြျော ဖွုနျးပဈသလိုဖွဈနပေမေယျ့ ဘာကိုမှကွောကျမနခေငျြတဲ့ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ လောလောဆယျမှာ ဒီနညျးကအဆငျပွပေါတယျ၊ ဒီ့ထကျတဆငျ့ထပျတကျသှားရငျတော့ ပွနျကိုဝငျမလာတော့ဘူးပေါ့လေ၊ update သိနတောကိုရှေးမလား၊ စိတျခမျြးသာမှုကိုရှေးမလားဆိုရငျ ကြှနျတျောကတော့ ဒုတိယတဈခုကိုပဲရှေးပါတယျ။
ကြှနျတျောက ဘာကိုမှကွောကျမနခေငျြ၊ စိုးရိမျမနခေငျြတဲ့လူဆိုတော့ အခုအခြိနျ newsfeed က သိပျအဆငျမပွပေါဘူး၊ အားလုံးပဲပြျောစရာ သင်ျကွနျရကျမြားဖွဈကွပါစေ လို့ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။ With love, ညိုမငျးလှငျ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ညိုမငျးလှငျကတော့ စိုးရိမျမှုနဲ့ ကွောကျရှံမနခေငျြတဲ့ သူမို့ စိတျခမျြးသာစှာ နနေိုငျအောငျ Facebook ကို သိပျမသုံးဖွဈတော့ တဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးထဲမှာရော ညိုမငျးလှငျပွောသလို စိတျခမျြးသာမှုနဲ့ Update သတငျးသိနိုငျမှုဆိုရငျ ဘယျဟာကို ရှေးမလဲ၊?? ပရိသတျကွီးလညျး ထငျမွငျမိတဲ့ ခံစားခကျြလေးတှကေို မှတျခကျြလေးတှအေဖွဈ ရေးသားခဲ့ကွပါဦးနျော..။
“သူမအတွက် စိတ်ပူနေတဲ့တစ်ယောက်သောသူကို အမိုက်စားတော်ကီလေးနဲ့ ချုပ်လိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင်”
ချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်တုန်းကမှ အလွဲသုံးစားမလုပ်ခဲ့လို့ အထင်အမြင်လွဲမှုတွေ ကင်းရှင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
“ခရီးသွားတုန်းက အမှတ်တရလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ချပြလိုက်တဲ့ နိုင်းနိုင်းရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
” သူ့အနေနဲ့ TikTok တွေဆော့ကာဆိုရှယ်မီဒီပေါ်ဝေမျှရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် “
စေတနာထားပြီးအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့် မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့အနေနဲ့ (၈၃) သိန်းတန်လက်ကောက် လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ မေခလာ
ဘဝအနိမ့်၊ အမြင့်၊ အတက်၊ အကျ များလွန်းခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတဲ့ ဇေရဲထက်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်သက်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ စီနီယာမင်းသမီး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့အပြိုင် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထား
အိမ်မှာအားတုန်းလေး အဖေသင်ပေးတဲ့ လက်မှုပညာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချခဲ့တဲ့ အိစိကွေး
Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရချိန်မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရသေးပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း သက်သာလာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ Dora Alex
သူမကိုချစ်ပြီး ဝန်းရံနေချိန်မှာ အခြားသူတွေကိုလည်း မထိခိုက်စေဖို့ ပရိသတ်တွေကို သတိပေးလာခဲ့တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်း